CM4 ကိုအသုံးပြုပြီး Samsung Galaxy S12 ကို Android Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်နည်း
ဒီနေ့ Samsung Galaxy S4 ကို Android Lollipop သို့ CM5.0 မှတရားဝင် ROM Android 12 Nightlys ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ။
CES 2015: ZTE S Pro 2၊ Mobile Hotspot၊ Projector နှင့် Android Device All in One
ယနေ့တွင် ZTE S Pro2ကို mobile access point plus projector plus Android 4.4.2 device ကိုတင်ပြသည်
Vodafone ၏ Samsung Galaxy S5 ကို Android 5.0 Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်နည်း
Vodafone Samsung Galaxy S5 ကို Android 5.0 Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်နည်းလမ်းနှစ်မျိုးဖြင့်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်ုပ်ရှင်းပြသည်။
Xiaomi Redmi 2, စပိန်နိုင်ငံမှာယူရို ၁၅၀ ရတယ်
ယခုအခါတွင် Xiaomi RedMi2သည်အာရှတွင်ထုတ်လုပ်သည့်အလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းကိုယူရို ၁၅၀ ဖြင့်အိမ်တွင်ရောင်းချနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
Samsung Penvatars သည် Note4နှင့် Note4Edge အတွက်မကြာမီထွက်လာတော့မည်
Samsung Penvatars သည်အခြေခံအားဖြင့် Samsung Galaxy Note4နှင့် Note4Edge အတွက်အမှန်တကယ်အမှန်တကယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ယခုနှစ်အစ၏အရေးအပါဆုံးနည်းပညာဖြစ်ရပ်၌ CES 2015 တွင် ZTE မှလာမည့်သတင်းများသည်ငါတို့အားပြသသည်။
တက်ဘလက်တွေကြိုက်လား ကောင်းပြီ၊ ၆၅ လက်မအရွယ်သားရဲကမင်းကိုချစ်တော့မယ်
Fuhu သည် Las Vegas ရှိ CES 2015 တွင် ၄၅ လက်မမှ ၆၅ လက်မအရွယ်အစားနှင့် NVIDIA ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူတက်ဘလက်အသစ်များဆက်တိုက်တင်ဆက်ပြသခဲ့သည်။
Play Store တွင်ရှိပြီးသား Android tablet များအတွက် Microsoft Office အက်ပလီကေးရှင်းများ
Word, Excel နှင့် PowerPoint ကဲ့သို့ Microsoft Office အက်ပလီကေးရှင်းများကို Play Store မှတက်ဘလက်များအတွက်ယခုရရှိနိုင်သည်
Audi သည် LG ၏စမတ်နာရီအသစ်ကို၎င်း၏သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်အသုံးပြုသည်
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် Audi သည်ထူးခြားသော LG စမတ်နာရီကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ထုတ်လုပ်သူအတွက်သီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားသောနာရီတစ်လုံးဖြစ်မည်ဟုထင်ရသည်။
ပြောင်းလဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ထင်မြင်ချက်ဆောင်းပါး Samsung သည်ပရိသတ်ကို Samsung Galaxy S6 ဖြင့်ပြန်လည်ရယူနိုင်ရန်ပြုလုပ်ရမည်
Samsung Galaxy Note 5.0 အတွက် Android3update ကိုစစ်ထုတ်သည်
Samsung Galaxy Note 5.0 SM - N3 အတွက် Android 9005 L update ကိုပေါက်ကြားခဲ့သည် ဤတွင်သင်၏ terminal ကိုမွမ်းမံရန်မည်သို့ရှင်းပြသည်
သင်၏ Android ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်အတွက်ကောင်းမွန်သောအက်ပလီကေးရှင်း ၁၀ ခုဖြင့် ၂၀၁၅ ကိုစတင်ပါ
ယခုနှစ်စတင်ရန် Android အတွက်အက်ပလီကေးရှင်း (၁၀) ခုသည်သင်၏ဖုန်းတွင်ထည့်သွင်းထားသည့် Pushbullet, Link Bubble သို့မဟုတ် Nokia Here Maps စသည့်အကောင်းဆုံးပရိုဂရမ်များဖြင့်စတင်သည်။
Samsung Galaxy Note 3, Note 4, Note Edge နှင့် Galaxy S4 တို့သည် Android 5.0 ကိုဇန်နဝါရီလတွင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်
Android 5.0 L မရရှိသေးသည့် Samsung ဖုန်းများသည်ဇန်န ၀ ါရီလတစ်လျှောက်လုံးတွင်နောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြှင့်တင်မှုများပြုလုပ်နိုင်မည့်ရက်စွဲကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိထားပြီးဖြစ်သည်
Samsung Galaxy Note3တွင် Android Lollipop ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
Samsung Galaxy Note3တွင် Android Lollipop ကို Odin 3.0.9 ဖြင့်ကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းပုံ။ Samsung ရဲ့ Firmware ယိုစိမ့်မှု
စပိန် Samsung Galaxy S5 သည် Android 5.0 Lollipop ကိုရရှိထားပြီးဖြစ်သည်
အကယ်၍ သင်သည်စပိန်နိုင်ငံရှိ Samsung Galaxy S5 ကိုအသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူက Android 5.0 အတွက်တရားဝင် update ကိုဖြန့်ချိသောကြောင့်သင်ကံကောင်းပါစေလိမ့်မည်။
Motorola ၏အောင်မြင်မှုရဲ့အဓိကသော့ချက်ကဘာလဲဆိုတာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကမြောက်အမေရိကကုမ္ပဏီကို Android operating system နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးကမ္ဘာပေါ်ရှိဆိပ်ကမ်းများရဲ့နောက်ကွယ်မှာအဓိကရည်ညွှန်းချက်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်သည်။
Samsung ကရယ်စရာကောင်းတဲ့ခရစ်စမတ်ကြော်ငြာကိုကြေငြာလိုက်ပြီး Galaxy S5 ကရေစိုခံပါတယ်
Samsung Galaxy S5 ကြောင့်အသက်ပြန်ရှင်လာတဲ့ snowman ကိုကြေငြာလိုက်ပါတယ်
Samsung Galaxy Alpha ၏ယူနစ် ၁၀၀ သာရှိပြီးသားရေနောက်ကျောဖုံးပါရှိသည်
Samsung Galaxy Alpha ကထုတ်လုပ်ထားသောကိုယ်ထည်ဖြင့်အမျိုးအစား ၁၀၀ ယူနစ်သာထုတ်လုပ်နိုင်သည့် Samsung ၏မူကွဲအသစ်ထုတ်ဝေသည်။
Samsung သည်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက် 8GB RAM memory module များကိုထုတ်လုပ်သည်
8GB RAM module များကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး၊ 2016GB ကို ၂၀၁၅ တွင်စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်
Android Wear Lollipop ၏တိုးတက်မှုသည်ဘက်ထရီသက်တမ်းမှာ ၁၀၀ x ၁၀၀ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိရန်သံသယရှိစရာမလိုပါ။
Nexus6ကိုနှိုးရန်နှစ်ချက်ပုတ်ခြင်းကိုမည်သို့လုပ်မည်နည်း။
အကယ်၍ သင့်တွင် Rooted Nexus6ရှိပါကယနေ့ Nexus6ကိုနှိုးရန်နှစ်ချက်ထိကိုဘယ်လို enable လုပ်နိုင်မည်ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်။
ဒီနေ့ Moto 5.0.1 မှာ Android Wear 360 ကကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းတာကို OTA ကနေတစ်ဆင့်ရောက်ရှိလာတဲ့ update အသစ်ကိုဒီနေ့ပြသနေပါတယ်။
Android အတွက်ယခုရရှိနိုင်သည့်ခြေရာခံကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သော Tile ဖြင့်ဘာမှမဆုံးရှုံးပါနှင့်
Tile ကသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်နဲ့သော့တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက် app တွေကိုသူ့ဟာသူအမြဲတမ်းထားရှိဖို့လိုတယ်။
Micromax YUREKA သည်စမတ်ဖုန်းအသစ်ဖြစ်ပြီး CyanogenMod ပါ
CyanogenMod 11 သည် Micromax YUREKA စမတ်ဖုန်းအသစ်တွင်အိန္ဒိယ၌ဖြန့်ချိမည့် ROM ဗားရှင်းဖြစ်သည်။
သင်၏စမတ်ဖုန်းနှင့် Android Wear စမတ်နာရီအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဓာတ်ပုံပြ MyRoll Gallery
MyRoll Gallery သည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောဓာတ်ပုံပြခန်းနှင့်သင်၏ Android Wear အတွက်ပထမဆုံးဓာတ်ပုံပြခန်းဖြစ်သည်။
ဗီယက်နမ်ရှိ Samsung Galaxy Note3အသုံးပြုသူသည် OTA မှတစ်ဆင့် Android 5.0 ကိုလက်ခံရရှိသည်
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရှိ Samsung Galaxy Note3အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည် Android 5.0 ကို OTA မှတစ်ဆင့် update ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ Samsung ကဗီယက်နမ်မှာ update ကိုထုတ်နေပြီလား။
Motorola မှအတည်ပြုချက်အရ Moto 360 ကို Android Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်မှုကိုယနေ့ကမ္ဘာအနှံ့တွင်ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်၊
LG G Watch ကို Lollipop သို့ကိုယ်တိုင်မွမ်းမံရန်မကြိုးစားဘဲသေဆုံးရန်မလိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကိုဤနေရာတွင်ပြသပါမည်
Sony Xperia E4 ၏ပထမဆုံးပုံရိပ်များကိုစစ်ထုတ်သည်
ယနေ့တွင်သင်သည် Sony Xperia E4 ၏ပထမဆုံးပုံရိပ်များ၊ ဂျပန်ထုတ်လုပ်သူမှ mid-range terminal အသစ်ကိုပြသပါမည်။
Moto X 2014 အသစ်တွင် Android 5.0 Lollipop ကိုရရှိထားပြီးဖြစ်သည်
Moto X 2014 ကို Android 5.0 Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန် Motorola သည် OTA ကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဥရောပမော်ဒယ်များသို့တဖြည်းဖြည်းရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်
Snapdragon4ပရိုဆက်ဆာဖြင့် Samsung Galaxy Note 810 ကိုထုတ်လုပ်မည်
Samsung က Samsung Galaxy Note4ကိုတောင်ကိုရီးယားမှာ Qualcomm Snapdragon 810 ပရိုဆက်ဆာနဲ့ထုတ်လုပ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်
Gorilla Glass4ကိုပထမဆုံးအသုံးပြုသောစမတ်ဖုန်းမှာ Samsung Galaxy Alpha ဖြစ်သည်
Corning Gorilla Glass4panel အသစ်များကိုမကြာသေးမီကတရားဝင်တင်ဆက်ခဲ့သော်လည်း Galaxy Alpha သည်ဤ panel ကိုအသုံးပြုထားသည်။
Nexus5ဟာသေပြီ၊ ဘုရင်ရှငျနတေယျ။
ဂူးဂဲလ်က Nexus5ထုတ်လုပ်မှုပြီးဆုံးပြီဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ၎င်းကို Google Play တွင်မတ်လတိုင်အောင် 2015 ခုနှစ်တွင်ရနိုင်သည်
Google နှင့် Motorola ၏ Nexus6သည်လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာကိုပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
ZTE Q7 သည် Tenna ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်
ZTE ကစမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးလောက်ကိုပြသတော့မှာပါ။ ထို့အပြင် ZTE Q7 ကိုအာရှစက်ပစ္စည်းအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အေဂျင်စီဖြစ်သော Tenna ကမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ထိုတွင်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ၏စမတ်ဖုန်းအသစ်၏ဒီဇိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်ခဲ့သည်။ အဲဒါ Apple ရဲ့ဖုန်းလိုမဟုတ်လား။
Samsung Gear VR ကိုအမေရိကန်မှာရောင်းပြီ
AT&T အော်ပရေတာသည် Samsung Gear VR virtual reality မျက်မှန်များကိုဒေါ်လာ ၁၉၉ ဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်။ ဒါဟာစပိန်မကြာမီရောက်ရှိလာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်
ကမ်းလှမ်းသည် !! LG G Watch 99 ယူရိုကန့်သတ်ချက်ရှိသည်
LG G Watch ကို ၉၉ ယူရိုသာဝယ်ယူရမည့်အချိန်ဖြစ်ပြီးအကန့်အသတ်ဖြင့် ၁၀၀ ယူရိုလျှော့စျေးဖြင့်ရရှိသည်
Motorola သည်၎င်း၏ဇိမ်ကျသောဒီဇိုင်းကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုသော Moto 360 အကြောင်းကြေငြာချက်လေးခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Motorola သည်၎င်း၏လူကြိုက်များသောစမတ်နာရီ၏အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းကိုချီးမြှောက်။ Moto 360 အတွက်ကြေငြာချက်အသစ်လေးခုကိုထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
Moto G 2013 သည် Android 5.0 Lollipop ကိုရရှိထားပြီးဖြစ်သည်
ဟုတ်တယ်၊ Motorola ထပ်လုပ်တယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် Moto G သည် Android 2013 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်မျှော်လင့်ထားသည့်အကြောင်းကြားစာကိုလက်ခံရရှိထားပြီးဖြစ်သည်
Samsung က AMOLED panel များအသုံးပြုခြင်းကိုငြင်းဆိုခဲ့သည်
Samsung က Galaxy S4 ကိုထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် AMOLED panel ကိုပြန်လည်အသုံးပြုတဲ့ကိရိယာကိုအသုံးပြုတယ်လို့စွပ်စွဲထားတဲ့အလုပ်သမားတစ်ယောက်ရဲ့စွပ်စွဲချက်ကို Samsung ကငြင်းဆိုလိုက်ပါတယ်
Samsung Galaxy S5 ကို Android 5.0 Official သို့ကိုယ်တိုင်မွမ်းမံနည်း
Samsung Galaxy S5 ကို Android 5.0 Official သို့အဆင့်မြှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်ုပ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်
Android 5.0 ကို Samsung Galaxy Note4မှာမြင်တွေ့ရမှာပါ
ဒီနေ့မှာ Android4Lollipop ပါတဲ့ Sansung Galaxy Note 5.0 ရဲ့ပုံပန်းသဏ္seeာန်ကိုသင်မြင်တွေ့နိုင်ပြီ
သင်၏တက်ဘလက်ကို Saanpad Stylus ဖြင့်မှတ်စုစာအုပ်အဖြစ်ပြောင်းလဲပါ
Saanpad Styles သည်အလွန်ရိုးရှင်းသော gadget တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အစွန်းအထင်းတစ်ခုမှမလိုဘဲကျွန်ုပ်တို့၏လက်ကိုထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တက်ဘလက်တွင်စာရေးနိုင်စေသည်။
Puzzlephone, Project Ara နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန် modular ဖုန်း
Puzzlephone ကိုတင်ဆက်မည့်ထိုင်းမိုဘိုင်းဖုန်းသစ်သည် Puzzle start ကိုပြသမည့်နှစ်သည် ၂၀၁၅ ဖြစ်လိမ့်မည်
Samsung Galaxy S5 ကီးဘုတ်ကိုမည်သည့် Android ပေါ်တွင်မဆိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သောဖိုင်များအပြင်မှန်ကန်သောတပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များဒီမှာပါ။
Cicret Bracelet သည်အနာဂတ်၏လက်ရာ၏အရူးအမူးစွဲလမ်းမှုဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးသော အချိန်မှစ၍ လှည့်စားမှုအနံ့နှင့်အနာဂတ်နည်းပညာကိုရှာဖွေနေသောအိပ်မက်မက်သူများ၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်လွယ်ကူသောငွေကိုသာရှာရန်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်။
Android Wear အတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည့်အက်ပ်များ၊ ဒီနေ့ Binary Watch Face
ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်သင်၏ Android Wear နာရီအတွက် binary watch ဖြစ်သော Binay Watch Face ကိုအကြံပြုပါသည်။ ငါသည်လည်းဤ binary နာရီအလုပ်လုပ်ပုံ၏ရှင်းပြချက်တစ်ခုပါဝင်သည်။
Samsung Galaxy S6 နှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးထွက်သတင်းများအရဒီဇိုင်းအသစ်သို့မဟုတ် TouchWiz အလွှာရှိတိုးတက်မှုများကဲ့သို့အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောသတင်းများကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
Sony Mobile သည် Black Friday အတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကမ်းလှမ်းချက်များကိုပြင်ဆင်သည်
ပထမဆုံးအနေဖြင့် Sony Mobile Spain သည်အွန်လိုင်းစတိုးမှတစ်ဆင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်အတူ Black Friday 2014 ကို ၂၀၁၄ တွင်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
Sonim XP7 Extreme သည် ၄၁ ရက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသောကမ္ဘာပေါ်တွင်လမ်းအကျယ်အပြန့်မရှိသောစမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်
အားကစားဝါသနာရှင်များနှင့်အတူလိုက်ပါလာသည့် Sonim XP41 Extreme စမတ်ဖုန်းဖြင့်သင့်တွင်ဘက်ထရီ ၄၁ ရက်ရှိမည်
Samsung Galaxy Note2ကို Android Lollipop သို့မွမ်းမံရန်
Samsung Galaxy Note2ကို Android Lollipop သို့မွမ်းမံရန်သင်လိုအပ်သည့်အရာများနှင့်သင်ခန်းစာ
Vexia သည် Disney ၏ Big Hero6အမျိုးအစားတက်ဘလက်ကိုတင်ဆက်ခဲ့ပြီး၎င်း၏ Android ထုတ်ကုန်များကိုပြန်လည်သက်တမ်းတိုးသည်
ယနေ့ခေတ် Vexia သည် Zippers5နှင့် Vexia Tab 8i Hero တို့တွင်ထင်ရှားသော Android ထုတ်ကုန်သစ်များကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
Android 5.0 Lollipop ကိုအသုံးမပြုသည့် Samsung terminal တွင် Material Design ကိုသုံးသော application များနှင့်ပြproblemsနာတက်လိမ့်မည်။
Samsung Galaxy S5 ၏ရောင်းအားသည်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်များစွာနည်းသည်
Samsung Galaxy S5 ၏နောက်ဆုံးရောင်းအားအချက်အလက်များအရ ၄ င်းတို့သည် ၄ ​​င်း၏အရင်စျေးထက် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းလျော့နည်းကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်
Android3နှင့်အထက် terminal တွင် Sony Xperia Z4.2 ၏ Walkman အက်ပလီကေးရှင်းကိုမည်သို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရမည်၊
Android4Lollipop ပါဝင်သည့် Samsung Galaxy S5.0 ကိုဗီဒီယိုအသစ်တစ်ခုပြသ
ဒီနေ့ Samsung Galaxy S4 က Android 5.0 ကိုအမြန်ဆုံးလက်ခံနိုင်အောင် Samsung Team ဘယ်လိုရှေ့ဆက်တိုးတက်နေတယ်ဆိုတာပြသတဲ့ဗွီဒီယိုအသစ်တစ်ခုကိုဒီနေ့ယူလာပါပြီ။
Android5Lollipop အသုံးပြုထားသော Samsung Galaxy S5.0 တွင်ဗီဒီယိုအသစ်တစ်ခုပြသ
ဒီနေ့မှာတော့ SamMobile အဖွဲ့ဆီကနေဗွီဒီယိုအသစ်တစ်ခုယူလာပေးတယ်။ အဲဒီမှာသူတို့က Samsung Galaxy S5 မှာ Google လည်ပတ်မှုစနစ်၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းအသစ်ကိုပြသနေသည်။ နှင့်အမှန်တရားကအတော်လေးကောင်းစွာလိပ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
Nexus6တွင်လျှို့ဝှက်သတိပေးချက် LED ရှိသည်ကိုသင်သိပါသလား။
အံ့သြစရာ! Google နှင့် Motorola's Nexus6တွင်ထိပ်စပီကာကင်တွင်လျှို့ဝှက်သတိပေးချက် LED ရှိသည်။
CM5 ကိုအသုံးပြုပြီး Samsung Galaxy S12 ကို Android Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်နည်း
ဒီနေ့ Samsung Galaxy S5 ကို Android Lollipop ကိုဒီပထမဆုံး Rom Cyanogenmod 12 Alpha မှတဆင့်ဘယ်လိုအဆင့်မြှင့်မလဲဆိုတာကိုယနေ့ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်
Samsung Galaxy Note3ကို Android Lollipop သို့တစ်ဆင့်ချင်းအဆင့်မြှင့်တင်နည်း
Android Lollipop ကိုတရားမဝင် Install လုပ်နည်း Samsung Galaxy S4 မှာ
Samsung Galaxy S4 နိုင်ငံတကာမော်ဒယ် GT-I9505 တွင် Android ပြည်နယ် Lollipop တွင်ပထမဆုံး Rom ရှိနေပြီ။
Nokia N1 ကိုဗီဒီယိုတွင်တွေ့နိုင်သည်
ဤဆောင်းပါးနှင့်တွဲဖက်သောဗီဒီယိုသည် Nokia N1 ၏ဒီဇိုင်းနှင့် Android 5.0 Lollipop အပေါ်အခြေခံထားသော interface ကိုပြသသည်။
၂၀၁၅ အကုန်တွင် Samsung က Full ခေါက်နိုင်သောစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုထုတ်လုပ်မည်
၂၀၁၅ ခုနှစ်အကုန်တွင် Samsung သည် Full Foldable Screen ပါသည့်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုထုတ်လုပ်မည်။ ကျနော်တို့ကတစ်ဝက်လောက်ခေါက်နိုင်တဲ့စမတ်ဖုန်းဒါမှမဟုတ်တက်ဘလက်အကြောင်းပြောနေတာပါ။
Android Wear အတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သောအပလီကေးရှင်းများ၊ ယနေ့အရောင်တောက်စေ
Android Wear ဖြင့်စမတ်နာရီ၏ဖန်သားပြင်တောက်ပမှုကိုသင်မချိန်နိုင်ပါ။ အခုဆိုရင် Brightness ကိုပြပါ။
အဆိုပါ Bq Aquaris E6 မဲနှိုက်၏ဆုရရှိသူ
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Bq Aquaris E6 သည် Carlos Merino García de Ciudad Real အသင်းအတွက်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်သော Samsung S5 နှင့် iPhone 5S?
Sony က 230MP IMX21 အာရုံခံကိရိယာကိုနောက် Xperia သို့ရောက်လိမ့်မည်
Xperia X4 အသစ်တွင် IMX230 အာရုံခံကိရိယာအသစ်ကိုထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်နိုင်သည်မှာ phase detect များပါဝင်သည်
Samsung Gear S ကို Gear S အတွေ့အကြုံနှင့်အခမဲ့ရယူပါ
Samsung Gear S ၏လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုစစ်ဆေးရန်သင့်အားရှင်းပြပါရစေ။ အကောင်းဆုံးစမတ်နာရီဖြစ်သည်။
Android 5.0 Lollipop OTA ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး Nexus ကို manually update လုပ်နည်း
Android 5.0 Lollipop OTA ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့် Nexus ကိုကိုယ်တိုင် update လုပ်ရန်အဆင့်ဆင့်သင်ခန်းစာအပြည့်အစုံ။
သင်၏ Nexus ကို Android 5.0 Lollipop သို့ကိုယ်တိုင်မွမ်းမံနည်း
နောက် Nexus ကို Android 5.0 Lollipop ကိုကိုယ်တိုင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်မသေဘဲကြိုးစားခြင်းကိုဘယ်လိုရှင်းပြရမယ်။
NVIDIA မှလူငယ်များက Android 18 ကိုနိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင်ရောက်ရှိမည်ဟုကတိပေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောသတင်းကိုလည်းသင်ကြေငြာသည်။
Moto G သည် Android 5.0 သို့ပထမဆုံးအကြိမ် update လုပ်သည့်စမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်
Moto G 2014 အသစ်ကို၎င်း၏မြောက်အမေရိကဗားရှင်းတွင် OTA မှတစ်ဆင့် Android 5.0 Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးဖြစ်သည်။ Motorola အမှတ်အသားပြုသည့်နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်
Sony Xperia Z4, Xperia Z4 Ultra, Xperia Z4 Compact နှင့် Xperia Z4 Tablet နှင့်ပတ်သက်သည့်ကောလာဟလများ
မနေ့ကဂျပန်ကုမ္ပဏီ Sony ၏ ၂၀၁၅ အတွက် Android ထုတ်ကုန်သစ်များနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းကိုမနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
ကျနော်တို့ NGS Odysea 470HD ကိုစမ်းသပ်ခဲ့တယ်
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ Motorola Moto G 470 ၏စျေးနှုန်းအကွာအဝေးရှိ terminal ဖြစ်သော NGS Odysea 2014HD နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ဖော်ပြသည်။
Moto G 2014 ကို Android Lollipop သို့လည်းယခုနှစ်မကုန်မီအဆင့်မြှင့်တင်မည်
ဤကဲ့သို့သောသတင်းများကြောင့် Motorola သည်၎င်း၏ဖောက်သည်များ၏ယုံကြည်မှုကိုရရှိခဲ့သည်နှင့်ကျွန်ုပ်သည် Moto G 2014 ကို Lollipop ပမာဏကို ၂၀၁၄ နှစ်ကုန်မတိုင်မီရရှိလိမ့်မည်ဟုမအံ့သြခဲ့ပါ။
Samsung Galaxy A3 နှင့် A5 တွင်ထုတ်လုပ်မှုပြproblemsနာရှိသည်
Samsung Galaxy A5 နှင့် Samsung Galaxy A3 တို့သည်သတ္တုကိုယ်ထည်တစ်ခုတည်းဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုတွင်ပြproblemsနာများကြုံတွေ့နေရသည်။
မည်သည့်နိုင်ငံများမှ Samsung Galaxy Note Edge ရောက်ရှိမည်နည်း။
စပိန်အပါအ ၀ င် Samsung Galaxy Note Edge ရောက်ရှိမည့်နိုင်ငံများကို Sammobile မှယောက်ျားများကထုတ်ဝေခဲ့သည်။
Motorola France မှ Moto Maxx သည်ဥရောပသို့မရောက်ရှိတော့ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်
သူတို့မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖျက်လိုက်သော်လည်း Motorola France ၏တွစ်တာပရိုဖိုင်းတွင် Moto Maxx သည်ဥရောပသို့နောက်ဆုံးမရောက်ရှိတော့ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
Samsung မှာကိုယ်ပိုင် antennagate ကိစ္စရှိတယ်
Samsung Galaxy A3 နဲ့ A5 မှာ signal လက်ခံရရှိခြင်းပြproblemsနာရှိနိုင်တယ်။ ဆမ်ဆောင်းက antennagate အမှုအသစ်တစ်ခုနှင့်အတူလာမလား။
မည်သည့်ကိရိယာအမျိုးအစားအတွက်မဆိုစိတ်လှုပ်ရှားစေသော Bluetooth Speaker Walio IBTA 211 ကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့သည်
ယနေ့တွင်သင့်အား Walio အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သော Walio IBTA 211 မှစွမ်းရည်၊ အသံအရည်အသွေးနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ၂၆ ယူရိုထက်လျော့နည်းသောစိတ်လှုပ်ရှားစေသော Bluetooth စပီကာ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်ကိုယူဆောင်လာမည်။
SamMobile မှလူများက Samsung Galaxy S5 ရှိ Android4Lollipop နှင့် Android Kitkat နှင့်နှိုင်းယှဉ်မှုကိုပြသည်
Samsung သည် Samsung Galaxy Note4၏အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းပြောနေသည့်ကြော်ငြာအသစ်များကိုဆက်လက်ထုတ်ဝေသည်။ ယနေ့တွင်ကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူသည် Note Pen ၏အထင်ရှားဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သော S Pen ကိုအထူးအလေးပေးသောဗီဒီယိုအသစ်နှစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ယူဆောင်လာသည်။
ဒီ MOD နှင့်အတူ Samsung Galaxy Note4ကင်မရာ၏အရည်အသွေးတိုးတက်အောင်လုပ်နည်း
Samsung Galaxy Note4၏ကင်မရာကိုတိုးတက်စေရန် MOD
Android Lollipop ဗားရှင်းအသစ်ကို Moto X 2014 ကိုမွမ်းမံနည်း
လွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်ခန့်ကပေါက်ကြားခဲ့သောပထမဆုံးပေါက်ကြားသည့် firmware ကို အသုံးပြု၍ Moto X 2014 ကို Android 5.0 Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်နည်း။
Moto X 2014 တွင်ပထမဆုံး Android Lollipop ဗီဒီယို
Android Lollipop ၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည့်ပထမဆုံးဗီဒီယိုရှိပြီးဖြစ်သည်။ Moto X 2014 terminal - OTA မှတဆင့် Android 5.0 ကိုပထမဆုံးလက်ခံရရှိသော terminal ။
Motorola မှာ Moto G 2014 4G အသစ်တစ်ခုကိုလက်ထဲမှာထည့်သွင်းထားနိုင်ပါတယ်
Motorola သည်အထူးပြုလုပ်ထားသောစာနယ်ဇင်းများမှစမတ်ဖုန်းအသစ်များနှင့်အတူပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းများကိုထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Moto G 2014 အသစ်နှင့် Moto X 2014 အသစ်နှစ်မျိုးလုံးသည်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပြီးအီလီနွိုက်ပြည်နယ်အခြေစိုက်ထုတ်လုပ်သူသည် Moto G 4G အသစ်အတွက်အလုပ်လုပ်နေပုံရသည်။
Samsung Galaxy S6 နှင့်ပတ်သက်သည့်ကောလာဟလအသစ်များသည် Note Edge ကဲ့သို့နှစ်ထပ်ကွေးသောမျက်နှာပြင်အကြောင်းပြောကြသည်
စက်မှုလုပ်ငန်းလေ့လာဆန်းစစ်သူတစ် ဦး က Samsung Galaxy S6 သည် Note Edge ၏ဒီဇိုင်းနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ ကပြားနှစ်ခုပါရှိသော်လည်းကွေးသောမျက်နှာပြင်ရှိလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။
Sony က Xperia Z1, Z2 နှင့် Z3 အတွက် AOSP Lollipop တည်ဆောက်မှုဗီဒီယိုကိုပြသသည်
Sony က AOSP Lollipo စုစည်းမှုသည် Xperia Z3 တွင်၎င်း၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများနှင့်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုဗီဒီယိုတစ်ခုတွင်ပြသခဲ့သည်။
Andriidsis နှင့် HolaMOBI တို့ဖြင့် BQ Aquaris E6 ကိုအခမဲ့အသုံးပြုသည်
Androidsis နှင့် HolaMOBI တို့အား BQ Aquaris E6 အတွက်မဲချခြင်းတွင်ကျေးဇူးတင်ပါ။
Samsung သည် ၅.၉ လက်မ 5.9K display များကိုထုတ်လုပ်ရန်ပြင်ဆင်နေသည်။ လာမည့် Samsung Galaxy Note4အတွက်လား။
Samsung သည်သြဂုတ်လတွင် ၅.၉ လက်မအရွယ် 4K display များကိုအကြီးစားထုတ်လုပ်ရန်ပြင်ဆင်နေသည်။ Samsung Galaxy Note 5.9 သည်ဤနည်းပညာနှင့်ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်မလား။
Moto X 2014 သည် Android 5.0 Lollipop ကိုလက်ခံရရှိသည့်ပထမဆုံး terminal ဖြစ်လာနိုင်သည်
တကယ်လို့များတရားဝင်လုပ်ပြီးမှသာအတည်ပြုလိုက်ရင် Moto X 2014 ဟာ Android 5.0 Lollipop ကိုပထမဆုံးရရှိတဲ့ terminal ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။
Motorola သည် Moto Maxx ကိုယခုအချိန်တွင်ဘရာဇီးတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်
Motorola သည်ဘရာဇီးလ်ရှိ Moto Maxx ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောကိရိယာဖြစ်သော်လည်းယခုအချိန်အထိဥရောပသို့ရောက်မလာသေး
Jawbone သည် Up Move ဟုခေါ်သောကိုယ်ပိုင်တွက်ချက်မှုကိုယူရို ၄၉.၉၉ နှင့် ၆ လဘက်ထရီအသုံးပြုသည်
Jawbone Up Move သည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းနှင့်ပုံသဏ္maintainingာန်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောကိုယ်ပိုင်တွက်ချက်မှုအတိုင်းအတာဖြစ်သည်။
macmixing လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင့်အားပထမဆုံး Nexus6Unboxing ကိုပြသပြီးကုန်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များကိုအဝေးမှဖော်ပြပေးနိုင်သည်။
Sony က Xperia Z ၏ Android Lollipop မွမ်းမံမှုများအကြောင်းဟယ်လိုဝင်းအတွက်ဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Android Lollipop update သည် Sony Xperia Z အကွာအဝေးအားလုံးသို့ရောက်ရှိလိမ့်မည်။ ဂျပန်ကုမ္ပဏီသည်ဟယ်လိုဝင်းဗွီဒီယိုကိုပူနွေးစေသည်
Samsung က Samsung Galaxy A3 နှင့် Galaxy A5 ကိုကြေညာ
Samsung က Galaxy A3 နှင့် Galaxy A5 အလွန်ပါးလွှာသောသတ္တုဖုန်းနှစ်မျိုးကိုကြေငြာခဲ့သည်
Microsoft Band စမတ်လက်ကောက်ကိုကြေညာခဲ့သည်
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်သည် Microsoft Band ဟုခေါ်သောဤစမတ်လက်ကောက်အသစ်ဖြင့်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းအသစ်များကိုလက်ခံသည်
Oppo N3 သည် 5.5 is 1080p မျက်နှာပြင်နှင့် 16MP လှည့်ကင်မရာဖြင့်တရားဝင်ဖြစ်သည်
Oppo N3 သည် 16MP ကင်မရာဖြင့် Android အတွက်ဓာတ်ပုံကိုအထူးအလေးထားသည်
Baidu နှင့် Sony Xperia privacy ကိစ္စများ
Sony Xperia တွင် Baidu ဖိုင်တွဲကို Sony ၏ MyXperia တည်နေရာဝန်ဆောင်မှုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်
၎င်းသည်ဆိုနီအတွက်အချိန်ကောင်းမဟုတ်ပါ။ နှစ်စဉ်ရလဒ်မကောင်းသောကြောင့် Sony Xperia Z3 နှင့် Xperia Z3 Compact တို့တွင်ကင်မရာပြproblemsနာများရှိနေသည်။
Android 5.0 Lollipop သို့ update လုပ်မည့် Motorola ထုတ်ကုန်များစာရင်းကိုတရားဝင်အတည်ပြုထားသည်
Android 5.0 Lollipop သို့ update လုပ်မည့် Motorola ထုတ်ကုန်များစာရင်းကိုတရားဝင်အတည်ပြုထားသည်။
Motorola Droid Turbo သည် ၄၈ နာရီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များကိုပေးသည်
Motorola သည် Verizon အော်ပရေတာမှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်သောမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောစမတ်ဖုန်းဖြစ်သော Motorola Droid Turbo ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်
Android Wear အတွက်အသုံးချပရိုဂရမ်များ - ယနေ့ @here, သင့်လက်ရှိတည်နေရာကိုအချိန်နှင့်အမျှသိရန်အသုံးချခြင်း
@here for Android Wear သည်သင်၏ Wareable Android ရှိမြေပုံများပေါ်တွင်သင့်လိပ်စာအပြည့်အစုံနှင့်တည်နေရာအတိအကျကိုဖော်ပြခြင်းအားဖြင့်သင့်လက်ရှိတည်နေရာကိုအမြဲတမ်းသိရန်ခွင့်ပြုသည်။ Wareable Android
Samsung Galaxy S5 Active ကိုနယ်သာလန်သို့နို ၀ င်ဘာလတွင်ရောက်ရှိမည်
Samsung Galaxy S5 Active ကိုနို ၀ င်ဘာအလယ်လောက်မှာနယ်သာလန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်
Amazon သည် Chromecast ပြိုင်ဘက် Fire TV Stick ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်
Fire TV Stick ဖြင့်အကြောင်းအရာကိုတူညီသော HDMI ဆက်သွယ်မှုဖြင့်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် TV ဖန်သားပြင်သို့ထုတ်လွှင့်နိုင်သည်
Android Wear 4.4W2 အသစ် update အသစ်ကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည်
ဒီနေရာမှာ Android Wear 4.4W2 အသစ်မွမ်းမံမှုအသစ်ကိုဗီဒီယိုတစ်ခု၏အကူအညီဖြင့်ရှင်းပြပါမယ်
Samsung က Galaxy Note4ကိုမမေ့စေချင်ဘူး
Samsung ကကြေငြာချက်နှစ်ခုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး၎င်းတွင်ကင်မရာနှင့် Samsung Galaxy Note4၏ S Pen ဖြစ်နိုင်ခြေများကိုဖော်ပြထားသည်။
ဆိုနီသည် ၁၂ လက်မအရွယ်တက်ဘလက်တစ်လုံးနှင့်ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်
ကောလာဟလအသစ်များအရဆိုနီသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ပထမသုံးလပတ်တွင် ၁၂ လက်မအရွယ်တက်ဘလက်နှင့်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုထုတ်လုပ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုဆိုခဲ့သည်။
Samsung ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် Samsung Galaxy A7 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့ကို၎င်း၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများကိုအတည်ပြုခြင်းအပြင်လူသိများသည်။
Sunstech သည်စမတ်ဖုန်းတိုင်း၏အကောင်းဆုံးကို uSUN300 သို့ယူဆောင်လာသည်
ဒီနေ့စပိန်ကုမ္ပဏီ Sunstech ကဖန်တီးထားတဲ့စမတ်ဖုန်း uSUN 300 အကြောင်းမင်းတို့ကိုအခုပြောမယ်။
Samsung Galaxy Golden 2, အဖုံးနှင့်အဆင့်မြင့်အင်္ဂါရပ်များပါရှိသည်
တစ် ဦး ကစပ်စုစက်ကိရိယာ TENNA ဖြတ်သန်းခဲ့သည်။ Samsung Galaxy Golden 2, အဖုံးနဲ့အဆင့်မြင့်အင်္ဂါရပ်တွေပါတဲ့ Android စမတ်ဖုန်းအကြောင်းပြောနေတာပါ။
Samsung Galaxy Note4သည် Sony ကင်မရာကိုသုံးသည်
Samsung Galaxy Note4ကိုဖွင့်ပြီးနောက် ISOCELL မှန်ဘီလူးမဟုတ်ဘဲ Sony IMX240 အာရုံခံကိရိယာကိုအသုံးမပြုကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ယနေ့ခေတ် Android Wear WatchFaces အတွက်အသုံးဝင်သောအက်ပလီကေးရှင်းများ
Android Wear WatchFaces သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင် Android Wear အတွက်နာရီများကိုလုံးဝလွတ်လပ်စွာဒီဇိုင်းဆွဲရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဒီရိုးရှင်းတဲ့သင်ခန်းစာမှာ Nexus4ကို Android 5.0 Lollipop ကိုကျွန်တော် Cooked Rom ထည့်သွင်းနေသလိုမျိုးဘယ်လို update လုပ်ရမယ်ဆိုတာပြသခဲ့ပါတယ်။
ပြုပြင်ထားသော Recovery ကို Bq Aquaris 5,7 to တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည် (အလွန်လွယ်သည်)
ပြုပြင်ထားသော Recovery ကို bq Aquaris 5,7 တွင်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည့်သင်ခန်းစာအပြည့်အစုံကိုဖတ်ပါ။
၁၀ စက္ကန့်အတွင်း Bq Aquaris ၅.၇ R Root လုပ်နည်း
ဒီနေရာမှာ ၁၀ စက္ကန့်အတွင်းမှာပဲကွန်ပျူတာရဲ့ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုမလိုပဲ Root Bq Aquaris 5,7 "ကိုလိုက်နာရန်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရှင်းပြပါတယ်။
[အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး] ယခုသင် Nexus9ကိုယခု Google Play တွင် ၀ ယ်နိုင်သည် !!
ဒီနေ့မှစပြီး Nexus9ကို Amazon.com မှာ ၀ ယ်ယူနိုင်ပြီးကြိုတင်မှာကြားထားချက်အနေနဲ့လာမယ့်နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်မှာတင်ပို့မှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်၏ Nexus5သို့မဟုတ် Nexus7ကို Android 5.0 သို့ကိုယ်တိုင် Update လုပ်ပါ
သင်၏ Nexus5(သို့) Nexus7ကို Android 5.0 Lollipop သို့လွယ်ကူပြီးအဆင့်ဆင့်သင်ခန်းစာဖြင့်အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ။
Motorola စာမျက်နှာရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Nexus6ဟာရေစိုခံပါတယ်၊